Seenaa Gababaa obbo Bayyisaa Gutamaa – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSeenaa Gababaa obbo Bayyisaa Gutamaa
Camsaa Bara 2020
Obbo Bayyisaa Gutamaa abbaa isaanii obbo Gutamaa Warii fi haadha isaanii adde Dastaa Nagaawoo irraa bara 1920 Godina Kibba dhi’a Shaggar aanaa Bachoo ganda Baatuu jedhamee beekaamu keessatti dhalatan. Obbo Bayyisaan obboleewwaan dhiiraafi dubaraa 17 yoo qabataan maatii ballaa keessatti obbolaawan isaanii mara waliin gammaachuu dhan haadaafi abbaa isaanii waliin guddattan.
Obbo Bayyisaa Gutamaa Warii akkuma ijoolleen Qotee bulaa Oromoo guddaatanitti, Jabbii tikisaani, Horii egaani, Aramaafi meesii, meesuun warra isaanii tajaajilaafi gargaaraa guddataan.
Ummuriin isaani barumsaaf akkuma gaheen yeroo sanatti barumsi calqabaa fi inni duraa bakki itti keennaamu, Qeesii biratti waan ta’eef, mana barumsa Qeesii naannoo isaanii jiru Seenaanii amma dhumaatti barnoota Diyaqoonii ta’uuf keennamu maraa barataanii xumurun Diyaqoonii ta’aniiyeroo yeroo murta’eef mana amaantaa Ortodooksii keessa seenanii tajaajilaa akka turaan galmeen seenaa jireenya isaani ni addeessa.
Obbo Bayyisaan Gutamaa mana barumsa ammaayyaa galaanii kutaa 1-8 magaalaa Walisoo keessatti kan argamu mana barumsa Sadarkaa Lammaffaa Dajjazmaach Garaasuu Dhukii keessatti barataanii yoo xumuran,kutaa 9-12 ammoo gara magaalaa Finfinneetti darbuun mana brumsa Sadarkaa lammaffaa olaanaa Tafarii Mokkonnoon Seenaan barataanii xumuraniru.
Obbo Bayyisaan barnoota Sadarkaa olaanaa itti fufuun Univaarstii Finfinnee keessatti barnoota Akkawuntii (Accounting) barataniiru.
Gama kaaniin ammoo adde Warqituu Dabalee waliin gaa’ela bultii jireenyaa ijaarataani ijoollee Sadii (3) yoo godhataan, obbo Barna-Baas Bayyisaafi adde Nava Bayyisaa yeroo ammaa USA / Ameerkaa kan jiraatan yoo ta’an adde Mary Bayyisaa ammoo bakka dhugaa deemaanii jiru.
Obbo Bayyisaa Gutamaa Haayyuu,beekaafi Qaroo namaa waan ta’aniif Sadarkaa adda addaatti hojjii gaggeessummaa irratti mudaa’amanii hojjachaa akka turan Seenaa jireenya isaanii ni mirkaneessa.
Bara Mootummaa Sirna gonfoo H/Sillaasee Kabajamoo obbo Bayyisaa Gutumaa filmaata Paarlamaa Ithoopiyaaf godhamu keessatti maqaa “Qotiyyoo fi Qotee bulaa/Barennaa Gabaree” jedhamu mallaattoo ittin beekaaman godhataanii dorgomiif dhiyaatanii akka turaan seenaan isaanii nuuf mirkaneessa.
Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru.
Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa.
Hojii mootummaa itti mudamaanii hojjataa turan kana keessattii gahuumsaafi dandeettii olaanaadhan hoggaanaa waan turaanii, bakka bu’oota mootummaa yeroo sanarraa badhaasa adda addaa argataniiru.
Kabajamoo obbo Bayyisaa Gutamaa bara 1992 keessa rakkina Siyaasa Oromoo biyya keenya keessa jiru irraa kan ka’een, baqaattummaan gara USA Ameerkaa dhufudhaan maatii isaani Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC jiraanitti dabalaman.
Jireenya Waggoota 28 oliif Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC waliin jiraatan kana keessatti hundi keenya akkuma beekinnu, abbaan keenya, obbo Bayyisaa Gutamaa nama qulqulluu,abbaa fira hundaa, nama maraaf jaalala malee jibba tokkollee kan hin qabine,yeroo gara namaatti dhufan gammaachuun kan nama simataan, Oromummaa isaaniif adaa uummata isaanii eenyumaan olitti nama jaalatan turan.
Obbo Bayyisaan aadaafi Saafuun, duudhaan Oromoo armaan dura dhokaatee ture, ifaatti baasanii, bakka ganamaatti deebisuuf barumsi isaan Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC iif keennaa turaan yoomi illee kan irrafataamu miti. Kabajamoo Obbo Bayyisaan Gutamaa Warii, barsiisaa aadaa keenya, barsiisaa eenymmaa keenya, abbaa keenya,obboleessa keenya, Irriyaa guddaa fi xiqqaa keenya, gaggeessaa keenya, Ifaa keenya, waa hunda keenya turaan yoon jenne, dhugaarraa fagaachuu keenya miti.
Kabajamoo obbo Bayyisaa Gutamaa Hawaasa Oromoo Washington DCtiif qabeenya guddaa turan. Bara 1992 irraa egalaanii hanga gaafa dhibamaanii mana yaalaa Seenaanitti, Jaarsa akka Jaarsatti, guddaa akka guddaatti, Xinnaa akka xinnaatti, ijoollee akka ijoolleetti, jaalalaafi maraarfannoon waliin ta’anii, aadaa sirna Gadaa Oromoo, adaa fuudhaafi erumaa, duudhaafi Saafuu Oromoon ittiin wal bulchu fi wal qajeelchu of qusaannoo tokko malee Hawaasa kana barsisaa turaniiru. Har’a abbaan hunda keenyaa, Shashaateen fuula Masqalaa, Baayyoo Gutamaa of-biraa dhabinnullee hojiin isaanii inni midhaagan nuuf dhisaanii deemaan, amma dhumaatti nu waliin jiraata.
Guddiniif dagaagina aadaa uummata kanaa bakka amma jiru kana gahuun isaa, Qeerroo fi Qarreen Oromoo akkasumaas Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC dammaaqisuu keessatti qooni fi ga’een obbo Bayyisaa Gutamaa qaban bakka kanaatti dubbataamee kan dhumu miti. Waan heduu irraa baraannee akka of-taanu nu godhaniru.
Aadaan Sirna Gadaa Oromoo akkatti gaggeefamu, beekumsafi haayyuummaa qabanin bakka waamamaan hundaatti argamaani barsisaa turaniiru.
Adaaan fudhaaf erumaa inni ganamaa akkatti gaggeefamu, barsisuun gamaatti warra ga’eel godhaatuuf ammoo qaaman irratti argamaanii karaa qabsisuun adaan Oromoo akka dagaagu gochuu irratti qodaa oolaanaa qabachaa turaniiru.
Waggoota 20 oliif Koree Sirna Kabajaa ayyaana Gubaafi Irreechaa, obbo Lubee Birruu waliin eenymaan dura ijaaranii Irreechi naannoo Washington DC qofatti osoo hin hafine biyya ambaa hundatti akka kabajamu kan obbo Lubee Birruu fi obbo Bayyisaa Gutamaati.
Oromooni maqaa alagaa qabani fi daa’imni dhalaattee Waggaa tokko hin guune, akkaa aadaa duudhaa Oromootti,guyyaa Irreechaa Ururufaamtee/Ururifaamee maqaa Oromoo firri fi lammiin jaalatu akka bahuuf kan godhaan obbo Bayyisaa Gutamaati. Kuni wagga waggaadhan Oromoota Washington DC biraatti akka adaatti fudhataamee hojii irra oola
Obbo Bayyisaa nama wal dhabe, akka Jaarsattiis ta’ee akka Irriyaatti ta’anii, Hawaasa kana boroota dheeraaf walitti haraarsuun tajaajilaa guddaa keennaa turaniiru.
Obbo Bayyisaa Gutamaa Warii Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC keessatti miseensa Bordii Koree hojii gaggeesituu ta’anii hojjataniiru.
Abbaan keenya obbo Bayyisaa Gutamaa Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC jirru hundaaf, Abidaariidha, Utubaadha, Qabeenya, Gaddiisa, Abdiidha, hogganaadha.
Beekaa Sirna Gadaafi Haayyuu akkanaa of biraa dhabuun keenya bay’ee,bay’ee nu gaddisiisa.
“Dhalooni karaa adeemadha” hundi keenyayyuu tarree gallee dabaree keenya eggachaa jirra.Karaa adeemuu kana irraa kan hafu hin jiru, yoo jiraate Seenaa dha. Seenaa obbo Bayyisaa Gutamaa inni bareedan, gochaa fi olmaan isaanii inni eebbifamaan, qulqullummaan isaanii inni akka nadhii dammaa bara baraan nu waliin jiraata.
Namni akka du’u inuma beekama. Kan hin beekamine guyyaa du’aati. Otuma garaan ofii kana beekuu yeroo guyyaan ishii geessu dhugaadha jedhanii fudhachuun ulfaataa dha. Yeroo lubbuun jirru caalaa yeroo namni tokko du’u hojiin isaa fuula namaa dura dhufa. Hojii fi Seenaa obbo Bayyisaa Gutamaa fuunduraa keenyee goonee yoo ilaalle hunda isaa himaanii fixuun urjii lakkaawu nutti ta’a.
Haata’u garuu duuti Kabajamoo obbo Bayyisaa Gutamaa bifa dachaa ta’een akka nu midhaa jiru ni hubana. Akka namaatti isaan dhabna. Akka madda beekumsaafi muxaannootti qabeenya bakka bufamuu hin dandeenyetu isaan waliin dhabna. Bifa Kanaan kan hubamu maatii qofa osoo hin taane Hawaasicha dha. Kanaaf gaddi keenya dacha dha.
Seenaa abbaa keenya, obboleessa keenya, mararaa keenya,Utubaa keenya, kokkolfaa fuula masqalaa kabajamoo obbo Bayyoo Gutamaa Hawaasin Oromoo naannoo Washington DC jiraannu jalaa dhokataa ta’ee waanti walitti himinu hin jiru.Obbo Bayyoon hunda keenyaaf abbaa fi obboleessa waan ta’aniif hundi keenya qixxuma beekina. Waanti hunda keenya nu bochiisu du’a isaanii qofaa miti.
Abbaa fi obboleessi dhugaa akkanaa yeroo badduu, kana keessaa ugguu nu biraa gara mana isaanii isa lammataatti kutaatanii nubiraa deemaan,dhabbaannee osoo hin gaggeesine, obbolawaan kessaan fi irriyoota keessaan kan Kanaan dura isin biraa deemaan, obbo Sisaay Ibsaa bira dhaqixaanii nagaatti, Obbo Fixaa Kabbadaa bira dhaqixaanii nagaatti,mucaa keessaan maqaaa Geetuu Lammii irraa Guutuu Lammii jettanii maqaa itti moggafattani guddiffatan bira dhaqixaanii nagaatti,Obbo Badhaaneefi Jamaal bira dhaqixaanii nagaatti,jennee osoo isaan hin gaggeesine hanqaachuun keenya bay’ee bay’ee nu gaddisiisa,
Abbaan Keenya obbo Bayyisaa Gutamaa Jireenya ummurii dheeraa waaqi umaa isaanii kenne,erga jirataniin booda Bitoteessaa 19, bara 2020 dhibamaani mana yaalaa Seenaanii yaalamaa osoo jiraanii dhibee yeroo ammaa uummata adunyaa kanaa fixaa jiruun achuma keessatti Koronnaan qabamanii Camsaa 4 bara 2020 dhalataanii ummurii waggaa 100 tiin adunyaa kana dhisaanii deemaaniiru.
Waaqini lubbuu isaaniif qabbana nuuf haa kennu.
Maatiif frottan isaanii akkasumaas Hawaasa Oromoo
Naannoo WashingtonDC jiran maraaf jajjabina haa keennuuf. !!
Mr. Bayisa Gutema Wari funeral service held on Saturday, May 9, 2020 at.
16225 Batchllors forest Rd,
Oromo Community Organization of Washington DC Metropolitan